किन घट्दैन बलात्कार ?
जनतापाटी ९ पुस ।
काठमाडौं। आजभोलि दिनहुँजसो बलात्कारका घटना बढ्दै गएको पाईएको छ। नारी हकका आवाज जति सशक्त हुँदै गरेका भएपनि आखिर यस्ता घटना समाज किन विसंगत छ ? शिक्षाको विकास हुँदै गर्दा पनि अनुशासनहीन कर्तुत गर्नेले टाउको उठाउने दुस्साहस गरिरहेकै छ।
देशले थुप्रै परिवर्तनका सिँढी चढ्दै आउँदा आशा र अप्ठ्यारा छँदै छन्, तर तिनका बीचमा नारीहिंसा, बालहिंसा, बलात्कार, छाउपडी या झुमालगायतका प्रथाको प्रताडनाले नारी दमन छँदै छ।
मानिसमा चेतनाको दियो किन बल्न सकेन रु पक्कै पनि हामी र हाम्रो व्यावहारिक सचेतनामा खोट छ। हेर्ने नै हो भने समाजले नारी कुण्ठा दबाएर राखेकै छ। सचेतना अभियानले कानुनलाई दह्रो बनाएकै छ तथापि कार्यान्वयन पाटोमा खोट रहेरै यस्ता घटनाले नारीमाथि अन्याय भइरहेकै छ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र गरिनु अनि पैसा हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंकारले ठूलाबडाको सोचलाई समाजले झापड हान्नैपर्छ। अर्को वर्ग धनीमानीभन्दा अशिक्षित छ, जसले कुविचार बोकेर कसैप्रति गिद्दे नजर लगाउँछ। पछि लाग्छ र दाउ छोप्छ। त्यो अवचेतन मनको कामुकतालाई आफूभन्दा कमजोर बालिका, नारीमाथि अन्धो भएर पोख्छ।
कतिपय अवस्थामा समाज अनुशासनको दायरा मिचेर, आर्थिक प्रलोभनमा फसेर लोभिने कार्यप्रति औंला उठाउन चाहँदैन। लज्जास्पद विषयमा पार्टीको काखी च्यापेर अन्याय गर्ने प्रयास पनि हुन्छन्। कति लापरबाही छ समाजभित्र, यस्ता अपराधमा मिलापत्रसम्म हुने समाचार सार्वजनिक भएका छन्। प्रहरीले नै यी विषयमा दिलोज्यान दिएर निष्पक्ष न्याय दिन चासो बढाउनुपर्ने हो तर समाजका हरेक नागरिकले यस्ता विषयमा सहयोग गर्नैपर्छ।
यौनजन्य हिंसामा महिला प्रहरीले पूर्ण अवसर नपाएका हुन् कि भन्ने भान यहाँ हुँदैछ। यसका लागि प्रचार अभियानमा जुट्ने दायित्व हरेक असल नागरिकको हो। न्यायको सुव्यवस्था गर्ने लौहदण्ड समातेका प्रहरीबाटै यस्ता घटना हुनु अनि धम्की आएका समाचार व्याप्त हुँदा जोकोहीको मन पिरोलिन्छ नै।
समाजमा यौन पिपासुहरूको दबदबाले नारीको बाँच्ने अधिकारमाथि प्रहार भएको छ। लाजमर्दो र घिनलाग्दो अनि अत्यन्तै अमानवीय नरपिशाची प्रवृत्तिका कारण नवजात शिशुदेखि कलिलै उमेरका बालिकासम्म बलात्कृत हुन्छन्।
गृह मन्त्रालयमा बसेर अधिकार हातमा लिएको प्रहरी प्रशासनले नै संवेदनालाई कुल्चिएर बेवास्ता गर्ने, लापरबाही गर्ने अनि यस्ता कर्तुतलाई कठघरामा उभ्याउनुको साटो छिपाउन पहल गर्नेको देश सेवालाई कसरी मूल्यांकन गर्ने रु ८० वर्षका बूढासमेत यस्तो कुकृत्य गर्न पछि पर्दैनन्। दोषीले सजाय पाए पनि पीडितको जीवन रक्षा र भविष्य कहाँ गएर न्याय माग्न योग्य रहन्छ ?
आज र हिजोको तथ्य
समाचारमाध्यममा बलात्कारका समाचार बारम्बार आइरहेका छन्। किन हुन्छन् त यस्ता व्यवहार रु कानुनले बलात्कारीलाई कति सजाय दिन्छ रु यो विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। मनन गर्नुपर्ने विषय छ– कानुनले पहुँचवालालाई राम्ररी बाँध्न सकेन। तिनका कर्तुतसँग कानुनले खुट्टा कमाएर व्यवहार गर्छ। पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न पछि पर्दैन।
अनि त्यस्ता नरपिशाचलाई रिहा गराउने कूटनीतिहरू कति सजिलै बुनिन्छन्। आखिर न्यायको झोली बोकेर कहाँ जाने भिख माग्न रु सञ्चार क्षेत्र पनि निष्पक्ष बनेन भने त ती पीडितले आफैं सजायको जालोमा फस्नुपर्छ। यसर्थ सञ्चारमाध्यमको दायित्व निष्पक्ष र निडर भएर सत्यतथ्य प्रवाह गर्नु हो।
सचेतना अभियानले कानुनलाई दह्रो बनाएकै छ तथापि कार्यान्वयन पाटोमा खोट रहेरै यस्ता घटनाले नारीमाथि अन्याय भइरहेकै छ। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र गरिनु अनि पैसा हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंकारले ठूलाबडाको सोचलाई समाजले झापड हान्नैपर्छ।
समाजमा अनुशासनको डर नहुनु मूल कारणमध्ये एउटा अवश्य हो। हिजो मानिसमा अलिकति पाप र धर्मको डर जति थियो, आज त्यो घट्दो छ। सामाजिक वातावरणमा छोरीचेलीलाई सम्मान गर्ने, नारीको इज्जत गर्ने एउटा धार्मिक विचारको पाटोबाट समाज पन्छिँदै छ।
मानिसले समाजको भय मिचेर कर्तुतजन्य जघन्य अपराध गर्न उद्यत् बनाउनुको मूल कारण त उसमा त्यो आत्मअनुशासन नहुनु नै हो। यसर्थ नारी अस्मिताका आवाज जति गुञ्जायमान भएर पनि यी पीडाले समाज कलुषित बन्दैछ।
पितृसत्ताको लिसो टाँसेर हिँडेको हाम्रो समाजले पुरुषप्रधानतालाई अलिकति तुष राखेरै न्याय दिन्छ। नारीलाई पोथी बासेको उपनामले लाञ्छना लगाउने, कमजोर र असक्तलाई बोक्सीको आरोपले अत्याचार गर्ने प्रवृत्तिलाई नारीको आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानी व्यवहारले मात्र जित्न सक्छ। यसर्थ हरेक नारी जातिले आफ्नो गोरेटोलाई स्वाभिमानी बनेर सहज बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ।
सुशासन र सञ्चार शक्ति
वर्तमान सन्दर्भमा प्रविधिले जन्माएको अर्को पीडाभित्र यस्ता कुकर्म गाँसिन पुगेका छन्। मानिसले विज्ञान प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै आफैंलाई त्यस्ता कर्ममा सामेल गराएका घटना भेटिन्छन्। मूलतः छाडा प्रवृत्ति र व्यवहारमा मानिसले तामसी भएर आफूलाई संलग्न गराउँदा यस्ता घटना हुन पुग्छन्।
यौनिक विषय मानिसका आवश्यकता भए पनि आजभोलि यसको दुरुपयोगले समाज नै कलुषित छ। त्यहाँ डरभन्दा ठूलो यौनेच्छा हुन पुग्छ, कामुकता हुन्छ तब मानिसले आफ्नो रूप बिर्सन्छ। आपसी विश्वास नरहँदा र त्यस्ता कार्यमा उद्यत् रहँदा परिवारको संरचनामै नराम्रो ठेस पुग्न थालेका घटनाले समाज संक्रमित बन्दैछ।
विकृत र विसंगत बन्दैछ। भाइचारा र सहकार्य नहुँदा शान्ति र सहकार्यमै ठेस पुगेको देखिन्छ। यसर्थ यस्ता कुकृत्यका लागि कानुनी दायरा दह्रो त बन्नैपर्छ, साथमा अनुशासन र नैतिक ज्ञान आवश्यक छ। हाम्रा संस्कृतिले केही अन्धपरम्पराबाहेक नारीलाई आदर त गरेको छ तर अब त्यसमा अनुशासनको पाठले हाम्रै पद्धति पनि दर्बिलो बन्नु आवश्यक छ।
एउटी नारीले घरलाई सजाएकी हुन्छिन्। परिवारलाई चलाएकी हुन्छिन्। प्रत्येक नारीले आत्मनिर्भरता र स्वाधीनतालाई बोध गर्न सक्नुपर्छ। तर समसत्ताको शिक्षालाई हरेक परिवारबाटै विकसित तुल्याउनुपर्छ। नारी मात्र असल भएर समाज सुन्दर बन्न सक्दैन। दुवैको व्यवहारमा शुद्धता र अनुशासन चाहिन्छ। नारी बलियो हुनु घर बलियो हुनु हो।
यसका लागि अरूको मुख ताकेर मात्रै जिउने परनिर्भरताको संस्कारलाई नारीले बदल्न जान्नुपर्छ। तर आपूm बाँच्न सक्ने बनिसक्दा परिवारमा घमण्ड देखाउनु पनि राम्रो नहोला। यसर्थ नारी हक र हितका लागि अब सुशिक्षा, सुशासन र मर्यादाको जग बलियो बन्नैपर्छ। यसका लागि सञ्चारमाध्यम नै सुशासनको कडी हो।
हरेक फटाहा बुद्धिलाई सञ्चारको शक्तिसँग डर लागेर न्यायालयको दण्डमा सहायता पुगेको विषय निर्विवाद छ। सञ्चारले समाजका पीडालाई पर्दाफास गर्नु समाजलाई न्यायको आधार प्रदान गर्नु नै हो। सञ्चारले पीडालाई खोल्ने शक्ति दिएको छ। नारी आवाजलाई बुलन्द बनाएको निर्विवाद छ। बरु यसमा कहिलेकाहीं हुने स्वार्थपूर्ण व्यवहारमा सञ्चारको शक्ति नमुछियोस्।